.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဗေဒင်မေးတာ ဝါသနာပါသူများအတွက် လက်ထောက်ဗေဒင် Flash ..
ကဲ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေလည်း စိတ်ဝင်စားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ လက်ထောက်ဗေဒင် Flash လေးပါ။
မနေ့ညက အွန်လိုင်းမှာ လျှောက်လည်ရင်းနဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုမှ တွေ့ခဲ့တာပါ။ တော်တော်လေးလည်း
မှန်ပါတယ်။ အပိုတွေ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ သိချင်ရင် မေးသွားလိုက်.. Free နော် ဟဲဟဲ.
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြီး မျှဝေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လင့်လေးကို ဟောဒီမှာ ယူလိုက်ပါ။
ခုလို ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်..
နောက်လည်း အချိန်ရရင် လာလည်ပါဦးလို့..ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ...
Posted by Thurainlin at 20:45
Labels: Flash, ဗေဒင်